Ingxoxo phakathi kukaMark Rutte noT Thierry Baudet ubungqina bokuthi akufanele uvotele: UMartin Vrijland
NguJeren Pauw kwi-Red Hat e-Amsterdam isenzo esilungelelanisiweyo (ebizwa ngokuba yi-mpikiswano) phakathi kukaMarko Rutte noTherry Baudet, kwakungoku, ngombono wam, ubungqina obuninzi bokuthi sijongene nabadlali abakhulu. Abadlali abakhulu abavala amehlo akho. Kule mpikiswano sabona ababini abaqeshwe kakuhle abaqeqeshiweyo abaye banike ubungqina obuphilileyo bokuthi akunandaba nokuba ngubani ovotayo, kodwa ukuba uhamba kuphela kwinqanawa A ukuthumela i-B yeenqwelo ezifanayo, kunye naloo nqanawa ihlala ihamba ngendlela efanayo. Umkhumbi we-FvD ubonakala ufuna ukuhamba ngekholeji entsha ngaphandle kwe-VVD yeenqanawa, kodwa oko kucinga nje ukuba u-Thierry Baudet uya kudala ukuze akukhonze kwinetha lakhe; ukhuseleko lomnxeba endikuxubusile kakhulu apha kwisayithi.
Ukulinganisa ukukwazi kunye neminyaka emininzi kuye kwaba nempembelelo eninzi yeNetherlands engavumelani ngokupheleleyo nemigaqo-nkqubo kaRhulumente waseDatshi. Ukuhlaziywa kwedatha enkulu kunokukwenza ukuba kube lula kwaye kungakhathaliseki ukuba wenza okungakanani okusemandleni akho ngeengxelo zomshuwalense oqhutywe ngerediyo, iTV kunye namaphephandaba; elo qela lisoloko lincinci. Ngoko ke kufuneka uhlale uqinisekisa ukuba unenguqulelo kuloo qela. Ukubulawa kukaPim Fortuyn akuzange kuncede, kwaye ukuqaliswa kweGeert Wilders kunye nokudibanisa kweqela lakhe kwiingxelo ezigqithiseleyo ezifana "nabancinci baseMorocco" abazange bancede. Kwakhona yinto eyenziwa yiYurophu ethatha inxaxheba ebanzi.
UTyerry Baudet wavunyelwa ukubonisa izolo, ngokubambisana noMark Rutte, indlela esilungileyo ngayo isicwangciso senqabiseko sokuphepha kunye nendlela abesilisa ababa ngayo phantsi kweflegi enye inqwelo. Yingakho bobabini banqamle ekupheleni kwempikiswano ukuba baye kwiipolongo ngokwenene kwaye baqiniseke. Ingxoxo enjalo ayikho into ephakamileyo yokusebenza. Unokuziqhathanisa nemilinganiselo yokumelana nathi esiyifumayo kwi-TV ye-American, apho abadlali bazi kakuhle ukuba bangabani na kwaye banokuphi na amaphuzu enzuzo kunye nokulahlekelwa. Isebenza apho inzuzo kunye nelahleko zivunyelwana kwangaphambili; nangona ingxoxo ibonakala ihamba ngokukhawuleza kwaye ibuhlungu kwaye iqhuma elikhulu.
Loo mntu uninzi lwabantu abayaziyo ukuba baxoxwa nguorhulumente unyaka nonyaka, kungakhathaliseki ukuba yiliphi iqela elivotayo, landa kulo lonke elaseYurophu. Ngoko ukuba ufuna ukugcina izinto ndawonye, ​​kufuneka ubambe elo qela. Ndibiza ngokuba iqhinga lokukhusela elikhuselekileyo apha. Ngoko ufuna umkhombe kunye nomthetheli e-board ukukhupha i-bait kule ntlanzi eceba ukudida ngoku ngoku. Ukuba inkokheli yezopolitiko (umlingisi) omele leli qela lifumana inkxaso encinci kakhulu, usebenze ezinye iibhombisi eziphakathi apha kunye nelokuba zinciphise iqela. Ukuthetha ngokubanzi, nangona kunjalo, iqhinga liye lalinganayo kwiYurophu (nangona e-US): uqala ukwenza elo qela likhule kakhulu, lilinqabise eluntwini, abakhuseli, abagxeki (kunye nehlazo cingela) kunye nekunene. Emva koko uvumele ezo ntshukumo zezopolitiko zenze inzuzo, ukwenzela ukuba bafumane ingqwalasela eninzi kubantu. Emva koko ubenza ukuba ekugqibeleni uxanduva lokungaphumeleli kwezoqoqosho kunye nentlalo kunye ne-1x ukujongana nokugxeka emphakathini kwisikhulu esikhulu kwaye unokuqinisekisa ukuba ubuninzi be-1 kuphela kwaye kukudityaniswa kwehlabathi kunye nobukhulu bamandla.
Yingakho sonke sibona ukuba ezo nkokheli zezopolitiko zixhomekeke kwizinto ezithintekayo. Lezo zibalo zidalwe ngamabomu (ngokusebenzisa izitatimende zeendaba) kwaye ngobusuku bokugqibela sabona indlela uMarko Rutte avunyelwe ukunamathela ngayo izitampu kuTeerry Baudet. Enyanisweni, ezo zitampu zixhomekeke kuwe, umvoti. Yiyo kanye injongo. Uya kuhlulwa ube ngumtshini. Uya kugqitywa. Iingcamango zakho zixhomekeke kumkhwa ochazwe ngaphambili ngokusebenzisa amajelo kunye nezindlela zezopolitiko ezixhaswe. Lo mqondiso ulungile, ungabuthandani kwabasetyhini, unxamnye ne-EU (okanye uhlanga), uvimba ngelizwe (umda ovalwe), unxamnye no-Islam, ilizwe lakhe, imali yakhe kunye neyomsebenzi wokurhweba kuqala, iimeko zemozulu zikholelwa kunye namakholwa kwiingcamango zobuqhetseba (ezifana kwintsimi yobuxoki bembali). I-Brexit, Nexit, Frexit (etcetera) iqela elinokufumana inkxaso kulo lonke elaseYurophu.
Iimvakalelo zamathumbu zihlala namaqela amakhulu kwaye ngoko maduze kufuneka iqhutywe kwinqanaba elikhulu kunye nomvakalelo odibene nalo mqondiso. Ukuba uye wakwazi ukudibanisa yonke into kunye nekhaneli enye kwaye uqale uvumele elo qela likhule, ungagcina usebenze iibhobho ezakhelwe ngaphakathi kwaye unqande umkhumbi. Unokutshabalalisa yonke indawo yeenqanawa ezikhuselekileyo zokhuseleko (eziye zafumana uphawu olufanayo kwiYurophu nase-US).
Uyakhathalela ezinye i-scandals apha naphandle, ukwenzela ukuba uhlalutyo lwesikhashana lwe-brand entsha luvele luvele. Ezi zinto zingabangelwa phantsi kwezopolitiko kuzo zonke iintlobo, kodwa ngaphezu kwazo zonke iingxoxo zecandelo lezopolitiko, iintetho zokungaxhatshazi, njl njl. Ekugqibeleni, nangona kunjalo, injongo yenze iqela (i-brand entsha) ijongene nokuhluleka kwezoqoqosho kunye nentlalo. I-Brexit isebenza ngale njongo. Kwakhona kwakukho isizathu sokuba uvoti lwe-Brexit ngaphambi kokuba ashiye i-EU avunyelwe ukuphumelela. Yingesizathu sokuba u-Theresa May, ngokubambisana nabo bonke abapolitiki baseBrithani (abalingisi), banako kwaye kufuneka benze inkqubo ye Brexit iphumelele. Kwimibala kunye nazo zonke iintlobo zemiphumo emibi, i-Brexit kufuneka iguqulwe ngokucacileyo iqela eliyimpembelelo kwiqela lephiko elifanelekileyo (uphawu olutsha olunokudibaniswa kuzo zonke iindidi zeengcamango). Inqanawa yokukhusela inqatha (yonke inqanawa yokukhusela i-brand ye-brand entsha) kufuneka ilitye ukuze abantu abancinci banokuthi bangene kwibhodi elidala. Inqwelo yexesha elidala elikuqhubela kakuhle ekubhekiseleleni kwihlabathi kunye nokuphambili kwamandla.
Indlela yodwa yokubhengeza abadlali bezopolitiko kukuba bayeke ukuhamba kwiipolon kwaye banciphise inkqubo kwisiseko sayo. U-Thierry Baudet ungumgca wokhuseleko lomnatha omele umele isandi (uphawu) olubhenela kwixesha elingaphantsi kwexesha. Yiloo nto abantu abazi ukuba bayaphila, kodwa yintoni efuna ukuphawulwa, ukwenzela ukuba eso sibonakaliso singadluliselwa ngenxa yeengxaki zonke kwaye uphawu lugqitywe ngakwesokudla kwaye abantu abancinayo banokubuyiselwa kwiinqanawa zamandulo ezithembekileyo kuba. Baya kuhlekwa ngcikivo kwaye baya kukushiya engqondweni yabo ukuba baphinde baphinde bagxeke.
Ukuba ufuna ngokwenene ukutshintsha into ethile, kufuneka ulahle ithemba lakho kwezopolitiko. Utshintsho alufi ngokuqhubeka nokuvota kubadlali (abadlali abasebenzisayo) abakufanele bakubambe. Utshintsho luya xa ubeka phantsi umsebenzi wakho, ungasayi kuhamba kwiipota kwaye uqhube abaphathi bamacandelo abezindaba kunye nezopolitiko kwiinqaba zabo. Akufanele ulindele ukuba utshintsho oluvela phezulu, kuba luyimbangela yeengxaki kunye nokuvota kwinqanaba elilandelayo lokukhusela umnqweno wokukhusela izakubuyisela kwakhona utshintsho. Kuza kucima kuphela umnqanawa wokukhusela umnqatha. Kumele uthathe inyathelo ngokwakho. Kuyisihlandlo sokutshintsha okukhulu kunye neenguqulelo ezifana echazwe apha.
Okuncinci ongakwenzayo ukwabelana ngale nqaku ngangokunokwenzeka! Emva koko uye waqalisa.
Uludwe lwekhonkco lovimba: npostrart.nl
Ileta engacatshulwayo evela kuMarko Rutte: Datshi waseDatshi
Ukwahluke phakathi komkhosi kunye nejoni
tags: Amsterdam, debat, EU, Yurophu, eziziimbalasane, FvD, umkhwa, Jeroen, uphawu, Peacock, obomvu, Rutte, kuvota, Thierry Baudet, tv, ukhetho, ingxoxo, yokuzonwabisa, VVD
Neimheid wabhala wathi:
23 Meyi 2019 kwi-09: 47
Ukuphendula ngokukhawuleza kwaye kubaluleke kakhulu ... into enhle
23 Meyi 2019 kwi-10: 04
Ulungile nanye kwezi zimbini ziya kusisindisa.
URutte uthe nje ukuba asikwazi ukushiya i-EU ngenxa yeebhanki zaseDatshi. Nasi isisombululo ukuba unorhulumente okhathalelayo ngabantu, uthabatha iibhanki uze uwasuse. Imali eyayiya eGrisi yayingasindisi abantu baseGrike kodwa iibhanki zaseDatshi naseJamani. Akunandaba ukuba abantu baxoxile baze bazibulale okanye bafe ngenxa yezifo ezilula. Ukuba i-ABN amro yenza inzuzo yeebhiliyoni ezimbini ngonyaka xa yayingummandla kaRhulumente akaxutyushwa. Le bhanki yayithengiswa kangangoko, ngelixa abantu abangamaDatshi bebenokufumana iibhiliyoni ezimbini ngonyaka.
Ngethuba nje ngokuba zethu iinkokheli ezithiwa ziyibuyisela kwakhona inkqubo yezemali kwaye zijongene nekhonkco lekhoboka okanye ityala, zikhona kule nkqubo.
Uninzi lwasentshonalanga lusebenza ubuncinane beentsuku ze-3 ngeveki kwiibhanki ezibolekise umoya oshushu. Ngenxa yoko, akukho mali eyaneleyo yokushiya yonke into kwaye umama kufuneka abuye asebenze. Ngaba abantwana bajonge kakuhle kurhulumente kayise. Oomama noomama abasebenza kanzima baphela ekunyamekeleni komama.
Kukho isisombululo esisodwa kunye nokuyeka ukuvota nokuhlawula.
Nabani na obonakalayo kwimeko, bonke banomsebenzi wokusigcina kwikhoboka lekhoboka.
23 Meyi 2019 kwi-10: 12
Kwaye ngoko ke oku: "Ukuba awuvote, awukwazi ukukhanya!"
Ngenye indlela ezungezile: ukuba uvota awuvunyelwe ukuba ugule, kuba ngoko unikezele ngokusemthethweni inkululeko yentando yeninzi igcwele ubuqhetseba nokukhohlisa. Into eyinkqubo yamanga (idemokhrasi yedemokhrasi eyenza nje ukuba idemokhrasi ikhona kwi-pawns ezikhethiweyo zamandla) okokuqala kufuneka iphulwe kwithambo. Ngoko ke akufanele ubenike ngokusemthethweni kwaye uphazamise yonke inkqubo.
23 Meyi 2019 kwi-10: 37
Ndiyathanda umzekelo wemikhumbi.
Abantu abambalwa kuloo nqanawa bayazi ukuba baya kutyelela ilizwe njengendawo yabo yokugqibela
apho bonke abantu bebhodi kufuneka basebenze njengezigqila kwaye ke wonke umntu kufuneka avotele umqhubi ohambisa iinqanawa kwisiqithi sekhoboka.
Ngaba usayazi phambi ko-Eva wokhetho?
Ngale ndlela uRutte ufumana inxalenye yecalamilo xa kufuneka akhethe phakathi kweSihogo nezulu, funda, akuyiyo intloni, inyaniso
23 Meyi 2019 kwi-22: 13
Ewe, ngokukhawuleza iPVDA iwina ... hahaha njani loo nto inokwenzeka?
27 Meyi 2019 kwi-09: 29
Ukucwina kwesithuthi "sokunene" sekuqalile:
Ukulahlekelwa kwevoti, 'kuphela kwimida yeidolophu ezinkulu' (subliminal for 'edge edge'), bonani apha:
« Nika iindaba ezigxekayo, unikele umbhali wombuso (Harbers): ukuthengisa ukuthembeka
Hlalana naye noMartin Vrijland kwi-Telegraaf.nl kunye noWilson Boldewijn (ividiyo) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.948.552